Xafiisyada WorkSource hadda waxay u furan yihiin in ballan laga qabsado keliya. Waxaad ballan qabsan kartaa adigoo la xiriiraya xafiiska WorkSource ee deegaankaaga. Shaqaale heegan ah ayaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, 8:30 subaxnimo ilaa 5 galabnimo. Shaqaalaha/xafiisyada WorkSource Oregon kaa caawin maayaan qaansheegashadaada shaqo-la'aanta. Wixii macluumaadka shaqo-la'aanta ah, booqo unemployment.oregon.gov. Si loo hubiyo badbaadada shaqaalaheena iyo booqdeyaasha loogana hortago faafitaanka COVID-19, waji-xidhka waa inay xirtaan dhammaan shaqaalaha iyo macaamiisha.
Munaasabadaha Shaqaaleynta iyo Shaqooyinka Xiisaha leh